I-Biographie kunye neencwadi ezibalaseleyo zika-Eduardo Mendoza | Uncwadi lwangoku
Ophumeleleyo kwiBhaso lePlaneta ngo-2010 kunye neBhaso leCervantes ngo-2016, U-Eduardo Mendoza yenye ye ababhali abakhulu bespanish yexesha lethu. Ngokuthe ngqo nangokuzenzekelayo, isimbo sondliwa ziiarchaisms eziphonononga ezona zinto zixhaphakileyo kulwimi lwethu, zihlala zihamba namabali abalinganiswa abangafaniyo kwilizwe elingaqondakaliyo, okanye ilizwe laseSpain elibonwe ngeendlela ezahlukeneyo. Sizicwilisa kwi- i-biography kunye neencwadi eziphambili zika-Eduardo Mendoza. Uyeza?
1 I-Biography kaEduardo Mendoza
2 Iincwadi ezigqwesileyo nguEduardo Mendoza
2.1 Inyaniso malunga necala likaSavolta
2.2 Imfihlakalo ye-haunted crypt
2.3 Akukho ndaba zivela kwigurb
2.4 Isixeko sokulinga
2.5 Ukulwa kwekati. IMadrid ngo-1936.
I-Biography kaEduardo Mendoza
Uzalelwe e-Barcelona ngoJanuwari 11, 1943, u-Eduardo Mendoza ngunyana womtshutshisi, u-Eduardo Mendoza Arias-Carvajal, kunye nekhaya, u-Cristina Garriga Alemany, owayengudade-mbali u-Ramón Garriga Alemany. Emva kokufunda kwizikolo ezahluka-hlukeneyo zonqulo, waphumelela izifundo zakhe zoMthetho kwiDyunivesithi yase-Barcelona eyayizimeleyo ngo-1965 waze kamva waya e-Yuropu, ngeloxesha wafumana imali yokufunda e-Sociology eLondon, elandelwa ngumsebenzi wakhe njengomcebisi okwexeshana eSpain. kude kube ngo-1973 kwavela ithuba lokuziqhelanisa no Umguquleli we-UN eUnited States.
Kuya kuba kweli lizwe apho ndiza kuthumela khona Incwadana yakhe yokuqala kunye neyona nto ibalulekileyo, Inyaniso malunga ne-Savolta Affair, ethathelwa ingqalelo ngabaninzi njengomsebenzi wemibono, kuba yayiyeyokuqala ukubonisa iimpawu zotshintsho kwezopolitiko olwaluza kuqinisekiswa kwiinyanga ezimbalwa kamva emva kokusweleka kukaFranco. Inqaku lokuqala lajika laba ngumthengisi othengisayo oqinisekisile amandla omlobi okuchaza inyani yaseSpain kwi-prism eyahlukileyo kunye nembono, ngakumbi eyesixeko saseBarcelona sajika sangumsebenzi kuninzi lwemisebenzi yakhe. Le noveli yamzuzela Abagxeki imbasa e 1976.
Kwiminyaka emithathu kamva, ukupapashwa kwe Imfihlakalo ye-haunted crypt, indibaniselwano yenoveli kunye nenoveli yamaGoth, yaqhubeka impumelelo yenoveli yakhe yangaphambili ukuqala isaga entsha: leyo yomcuphi ongenagama naye owayezakudlala inkwenkwezi kwimiqulu emithathu, iLabyrinth of Olives (1982), The Adventure of the Ladies ' Itoilet (2001) kunye nokuxhonywa kwengxowa nobomi (2012).
Emva kokubuyela eSpain ngo-1983, uMendoza waqhubeka esebenza njengomguquleli kwi-Barcelona yakhe nakwezinye iidolophu ezifana neVienna okanye iGeneva. Umsebenzi ebesoloko edibanisa nokupapashwa kwemisebenzi yakhe, yokuba Isixeko sokulinga, eyasungulwa ngo-1986, lo mntu wayecinga ukuba ngumsebenzi wobugcisa, okanye umdla Akukho ndaba zivela kwigurb, ibali elipapashwe ngezavenge e-El País ngexesha lokufika komphambukeli e-Barcelona ngexesha leenyanga ezazikhokelela kwi-Olimpiki ye-1992.
Ngo-1995 waqala ukufundisa kwiYunivesithi yasePompeu Fabra, e-Barcelona, ​​edibanisa umsebenzi wakhe nokubhala nokuzama ezinye iintlobo zebali elifutshane, isincoko, okanye kwithiyetha. Konke oku kukhanyisa isigqebelo kunye nokuhlekisa okucacisa i-bibliografi engathandabuzekiyo kunye nesimbo esaziwa ngokupheleleyo.
Ukongeza kule Mbasa yabaGxeki esele ikhankanyiwe, uMendoza uphumelele amabhaso anje nge iBhaso likaKafka, iMedici Prize, Elle Magazine Prize, iJosé Manuel Lara Foundation Prize, ibhaso leCervantes okanye ibhaso lePlaneta., awaphumelela phantsi kwegama elinguRicardo Medina ngenoveli yakhe uRiña de gato. IMadrid ngo-1976.
Eyona nto ibalulekileyo kwaye isebenzayo, ukukhutshwa kukaMendoza kutshanje kube yiLas barbas del propeta, ukuphononongwa kweendidi ezahlukeneyo ezivela eBhayibhileni.
Iincwadi ezigqwesileyo nguEduardo Mendoza
Inyaniso malunga necala likaSavolta
Umsebenzi wokuqala kaMendoza wapapashwa ngelixa wayehlala eUnited States, eguqula inkcubeko kunye nezentlalontle zaseSpain njengezintsonkothileyo. Ngaphandle kwesihloko Amajoni aseCatalonia, isihloko esivotelweyo nguzwilakhe kaFranco, igama elitsha alikhange libe yingxaki ekwenzeni ifuthe elikhulu. Umlinganiswa ophambili, uJavier Miranda, yindoda encinci yaseValladolid eshiya iBarcelona iyokufuna umsebenzi ngo-1918, ixesha elinengxaki e-Barcelona ngenxa yovukelo lweeklasi zethutyana kunye nokulwa koohlohlesakhe ngootsotsi. Incwadi yapapashwa kwiinyanga ezimbalwa ngaphambi kokubhubha kukaFranco, yaphumelela ibhaso labagxeki kunyaka olandelayo.
Ngaba ungathanda ukufunda Inyaniso malunga necala likaSavolta?
Inxalenye yokuqala yolu chungechunge lwabecuphi olungaziwayo lwapapashwa ngo-1979 emva kwexesha apho uMendoza ngokwakhe wagqiba kwelokuba achithe ixesha kude neSpain ukuze "abenwabe". Nantsi indlela le hodgepodge ye inoveli ye-gothic kunye emnyama apho uMkomishinala uFlores, ophanda ngokulahleka kwentombazana yoomama boLazarist, ogqiba ngoncedo lolwaphulo-mthetho olunezikhanyiso ezimbalwa ezivalelwe entolongweni iminyaka emihlanu. Isihloko sokuqala kwi-saga yeenoveli ezine ezipapashwe kude kube ngo-2012.
Ufundile Imfihlakalo ye-haunted crypt?
Akukho ndaba zivela kwigurb
Enye ye Iinoveli ezidumileyo zikaMendoza kwaye enye yezona ziye zagqithisa kwinkcubeko edumileyo leli bali linomdla elipapashwe ngamanqaku e-El País kunye iseti kwiintsuku ezikhokelela kwimidlalo yeOlimpiki yaseBarcelona. Ibali elixelela umlinganiswa ophambili wolunye uhlanga ofike evela kwenye iplanethi ekhangela iGurb, omnye umfokazi wazifihla e-Barcelona phantsi komzimba kaMarta Sánchez. Isizathu esifanelekileyo sokuhamba eSpain kunye neSpanish entle kwiindawo ezahlukeneyo kunye nabantu abadumileyo ukusuka kwindawo kunye nendawo.
Ungaphoswa Akukho ndaba zivela kwigurb.
Yapapashwa ngo-1986 yaza yaguqulwa kwangoko yenziwa enye ye umsebenzi wobugcisa kaEduardo Mendoza, Isixeko sokulinga Ibekwe kwisiXeko saseBarcelona phakathi kwendlela ye-Universal Expositions eyayibanjwe ngo-1888 kunye no-1829. emva kokwenza Ukusebenzisa ubuqhophololo kunye nokungabikho kwamanyala, ugqibela ngokuba ngomnye wamadoda atyebileyo eSpain. Radiography yexesha eliguqulwe nguMario Camus kwiscreen esikhulu ngo-1999.
Ukulwa kwekati. IMadrid ngo-1936.
Umsebenzi ophakamise uMendoza njenge ophumelele imbasa yePlaneta ngo-2010 Ibekwe eMadrid ekuqalekeni kweMfazwe yamakhaya, indawo apho iNgesi u-Anthony Whitelands iqhubeka khona, oza kuthi aqonde ixabiso lomzobo kaPrimo de Rivera kwaye onokuthi utshintshe ikhondo lemfazwe enkulu kwilizwe lethu. Kweli nkulungwane yama-XNUMX. Njengomdlalo ohlekisayo ngenxa yesihelegu, umbhali ubonelela ngomsebenzi oqinileyo, ofanelwe yindumiso yakhe.
Funda Ukulwa kwekati?
Zithini, ngokoluvo lwakho, Ezona ncwadi zintle nguPrimo de Rivera?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Ezahlukeneyo » Eduardo Mendoza: I-Biography kunye neencwadi ezilungileyo